Miverina ary tena mirongatra indray…: dimy ny matin’ny Covid-19, 470 ireo tranga vaovao | NewsMada
Miverina ary tena mirongatra indray…: dimy ny matin’ny Covid-19, 470 ireo tranga vaovao
Par Taratra sur 06/12/2021
Mazava izao fa miverina, ary tena mirongatra indray ny valanaretina Covid-19. Miteny ho azy ny tarehimarika. Avo roa heny miohatra amin’ny tamin’ny tapa-bolana lasa ny isan’ny tranga vaovao; 470. Efa misy dimy koa ireo maty tamin’izao andiany manaraka izao.
Manomboka mamono olona indray ny covid-19. Tao anatin’ny herinandro, izany hoe, nanomboka ny 27 novambra hatramin’ny 3 desambra teo, olona dimy ny maty. Misy olona 22 hafa miady mafy amin’ny fahafatesana satria ahitana tranga fahasarotana.
Tao anatin’io herinandro io ihany, olona 470 no fantatra fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus tamin’ny olona natao fitiliana miisa 6719. Nitombo avo roa heny izany raha oharina ny tamin’ny herinandro alohan’io (20-26 novambra: 258 ny tranga).
Anisan’ny ahitana olona marary betsaka ny faritra telo eto Madagasikara. Mitana ny lohalaharana amin’izany ny faritra Analamanga, ahitana marary miisa 191. Manaraka akaiky eon y faritra Vakinankaratra ; 114, ary ny faritra Matsiatra Ambony, ahitana marary miisa 98. Ankoatra ireo, 27 any Anosy, 9 any Menabe, 7 any Vatovavy Fitovinany ary 8 any Amoron’i Mania…
Anisan’ny faritra vaovao nahitana indray ny valanaretina ny any amin’ny faritra Itasy sy Alaotra Mangoro. Faritra 14 amin’ny 22, araka izany, ny ahitana indray ny valanaretina miditra tsikelikely amin’ny andiany fahatelo amin’izao faraparan’ny taona izao. Hatreto, tsy mbola misy ny fanambarana manokana mikasika ny fepetra. Mbola mitohy ny fisokafan’ny fiangonana sy ny mariazy ary ny fety aman-danonana, izay fotoana maha be olona mivorivory.
Mitohy hatrany kosa ny fanentanana amin’ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana sy ny fanentanana amin’ny fanaovana vaksiny. Mbola ilay covid-19 io miverina miparitaka io indray fa tsy mbola misy kosa ilay omicron eto amintsika, raha ny filazan’ny tomponandraikitra ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka.
Ho an’ny fanaovam-baksiny, 521.526 ireo fantatra fa vita vaksiny miaro amin’ny covid19. Tanjona ny hanatrarana izany ho 1.000.000 hatramin’ny faran’ny taona raha ny fanamarihan’ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka. Mbola manana vaksiny manodidinany 1.700.000 fatra i Madagasikara ankehitriny.